नेपालसंग सम्बन्ध चिसिए पछि गोर्खा पल्टनमा भारतले गर्दैछ यस्तो परिवर्तन – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालसंग सम्बन्ध चिसिए पछि गोर्खा पल्टनमा भारतले गर्दैछ यस्तो परिवर्तन
नेपालसंग सम्बन्ध चिसिए पछि गोर्खा पल्टनमा भारतले गर्दैछ यस्तो परिवर्तन
काठमाडौ । गोरखा पल्टन नेपालीहरुका लागि एउटा राम्रो रोजगारी हो । गोरखा पल्टनमा रहेका नेपालीहरुको कुनै बेला राम्रो प्रतिष्ठा हुन्छ भन्ने मानसिकता थियो । अहिले पनि धेरै नेपालीको जिवन यसैवाट चलेको छ । भारतसंगको सम्बन्ध गोर्खा पल्टनका कारण पनि गहिरो थियो । तर अहिले सिमा विवादका कारण सम्बन्ध चिसिएको बेला नेपालीलाई मात्र लिने गरिएको गोर्खा पल्टनमा भारतले विकल्प खोज्न थालेको छ । नेपालसँगको सम्बन्ध चिसिएका बेला भारतले गोर्खा पल्टनमा नेपाली र भारतीय गोर्खाबाहेक अन्यलाई पनि भर्ना लिने भएको छ ।
भारतीय सेनाले गोर्खा पल्टनमा भारतीय नागरिक पछि नेपालीले मात्र अवसर पाउने गरेका थिए । अब उत्तराखण्डका कुमाउनी र गढवालीलाई पनि गोर्खा पल्टनमा लिन थालिएको हो । हाल गोर्खा रेजिमेन्टमा ६० प्रतिशत नेपाली र ४० प्रतिशत भारतीयहरु रहेकोमा अब उत्तराखण्डका कुमाउनी र गढवाली पनि हुने भएका छन् ।
भारतीय सेनाका पूर्वजर्नेल अशोक मेहताले दुई महिनाअघि नै भारतको मन्त्रिपरिषदमा यस्तो प्रस्ताव लगेका थिए । हालै सो प्रस्ताव समितिवाट पारित भएको छ । भारतले पाइलयट परियोजना अन्तरर्गत सुरुमा कुमाउनी र गढवालीहरुलाई पनि भर्ना लिने भएको हो । सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतीय सेनामा नेपालीहरुलाई भर्ना लिने गरेको थियो।
अभिनेत्री उषा रजक सवारी दुर्घटनामा परिन्, घुँडा र टाउकोमा चोट
विदेशमा दशैँको टिका कुन साइतमा लगाउने ? हेर्नुहोस विभिन्न देशमा टिका लगाउने साइत !
काठमाडौँमा भएको भयानक सडक दुर्घटनामा दुई वर्षीया बालिकाको मृ,त्यु
‘बलि दिन’लैजादै गरेकी किशोरी यसरि फुत्किईन